Questex malitere na nzukọ 10th nke nzukọ Caribbean & Ntugharị Ntugharị njem na Curaçao
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Curacao » Questex malitere na nzukọ 10th nke nzukọ Caribbean & Ntugharị Ntugharị njem na Curaçao
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Curacao • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Tex. meghere nke iri nke nzuko Caribbean na nzuko (CMITE) taa na Santa Barbara Beach & Golf Resort na Willemstad, Curaçao.
CMITE na-ewebata ndị nhazi nzukọ nzukọ US na Canada na ndị na-agba ume na ndị na-agba ume na ndị ahịa sitere na Caribbean maka ụbọchị abụọ na ọkara nke ohere ịntanetị na-enweghị atụ ma zukọta nzukọ otu na otu na ime ụlọ. A haziri ihe omume ahụ na ndị mmekọ sitere na ECO DMS na Curaçao Tourist Board.
"Ihe omume CMITE bụ mmalite dị ukwuu, n'ihi nnabata nnabata nnabata nke ukwuu na ebe ọhụụ na-atọ ụtọ maka ndị bịara anyị na Curaçao mara mma," ka Jill Birkett, Director Director for Questex kwuru. “Pọtụfoliyo ihe omume MICE anyị bụ naanị nke na-enye nzukọ n'otu n'otu na nzuzo nke ime ụlọ nkwari akụ okomoko na mmemme ịkparịta ụka na-akpali akpali, na-enye ndị na-eweta ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa nnukwu uru. The Santa Barbara Beach & Golf Resort na-enye ngwakọta zuru oke nke oghere nzukọ, ụsọ osimiri, golf na ihe omume ntụrụndụ nke ọtụtụ n'ime ndị na-azụ anyị na-achọ mgbe ha na-eme atụmatụ ihe omume Caribbean ha.
Ihe omume ahụ meghere n'ụtụtụ a ebe ndị ọbịa riri nri ụtụtụ tupu ha agaa na nke ha, otu na otu. Daybọchị ahụ ga-ejedebe na ohere ị ga-aga ileta Marriott Curaçao na-emeghebeghị maka nnabata na njem na-esote nleta na Renaissance Curaçao Resort na Casino maka ihe ọ drinksụ drinksụ, ihe eji megharịa ọnụ na ịgba egwu n'okpuru kpakpando n'akụkụ mmiri Willemstad, ebe ndị na-azụ ahịa na ndị na-ebubata ya ga-enwe ohere iji zuru ike ma zuru ike mgbe ị na-aga n'ihu iwulite mmekọrịta. Izu ahụ na-ekwe nkwa ị delightụrị ọ withụ na enweghị ụkọ nke ntụrụndụ mpaghara, ezigbo nri, na mmemme miri emi nke ọdịbendị.
Ndị na-enye ngwaahịa gụnyere ụgbọ mmiri, ndị ọrụ njegharị, ụlọ ọrụ njikwa ebe, na-achọ njem, họtel, ebe ntụrụndụ na spa. Ndị na-azụ ahịa na-anọchite anya ndị na-azụ ihe nkwado dị iche iche gụnyere ndị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agba ume, yana ndị nhazi nzuko.
Ihe omume nke Mice nke Questex Travel Group gosipụtara na ọ ga-aga nke ọma site na ịbụ naanị onye nhazi ịnye nzukọ nke onwe, otu n'otu, yana ọzụzụ dị elu na ntanetị maka ohere nzukọ na ndị ọkachamara na-eme atụmatụ, yana ihe mkpali ndị na-azụ ahịa.